HIGH HERY tamin'ny laser fibre fanapahana milina OR-H - China Shandong Oree Laser
Ny avo-pahefana tamin'ny laser fibre fanapahana milina tsara indrindra dia avo-pahefana tamin'ny laser milina ho takelaka metaly, ny vola lany amin'ny fividianana kely ny vola lany sy ny fampiofanana, avo-fahombiazana sy ny haingam-pandeha fanapahana. Izany no safidy tsara indrindra ho an'ny mpampiasa mba hanao soa be. Fanapahana tamin'ny laser fibre io milina tena mampihatra ny Stainless vy, karbonina vy, firaka vy, lohataona vy, varahina lovia, aluminium takela, volamena, volafotsy, titane ary lovia hafa materials.Widely ampiasaina amin'ny dokam-barotra, ny tsindry ambony / ambany malefaka famokarana herinaratra kabinetra, damba Accessories fitaovana, fitaovana lakozia, fiara, milina, elevators, herinaratra Accessories, lohataona coil farantsa, Metro andalana faritra sy ny orinasa hafa.
ny vy tamin'ny laser fanapahana milina manana fonony miaro ny toetra mampiavaka ny rafitra hentitra, mahay mandanjalanja, tsy misy tabataba, fahatapahan'ny lalan-dra lehibe, haingana ny hetsika sy ny asa fanompoana ela velona. Ny fijery dia ho tsara tarehy kokoa, ary ny vokany dia ny hisorohana ny fahasimbana vokatry ny metaly vovoka amin'ny faran'ny ny fanodinana.
Laser hery, wattage
ny herin'ny tamin'ny laser tsirairay dia azo ovana araka ny fepetra takiana manokana fanapahana. Tamin'izany fomba izany, dia afaka hihaona milina iray isan-karazany fepetra fanapahana sy hahatratra ny vokatry ny multi-tanjona.
miasa Area 1500 * 3000mm (tsy voatery)
sary sokitra Speed 4500 * 2300 * 2000mm (tsy voatery)
fanapahana Speed ± 0.02mm
Scanning Avo Indrindra fametrahana mazava ± 0.03mm
fanampian'ny araka ny marina 145 / min
Previous: Exchange Platform Cutter Fibre Laser Cutting Machine OR-E
Manaraka: MOYEN-Sheet tamin'ny laser fibre fanapahana milina OR-FM